Zvaungaita Kuti Ukope, Nyora Mifananidzo Yekare MuShoko
Kopa uye Nyora Rambai Mifananidzo
Muteereri ane chirongwa chine mavara akawanda akasarudzwa akaita sekundu akandibata kuti ndibvunze kana pane nzira yekusarudza yese yerugwaro rutsvuku uye kukopa iyo mashoko kune imwe itsva document.
Pane nzira mbiri dzekuita izvi pasina kushandisa macro uye yekutanga iri kushandisa Tsvaga uye Shandisa chimwe chinhu muShoko.
Tsvaga uye Tsiva Maitiro #1
Tevera matanho ari pasi apa kuti udzidze kuti sei.
Vhura gwaro rine mavara akasiyana-siyana uye wozarura gwaro idzva raunoda kuisa mavara mavara
Endai kumunyori wepakutanga une zvinyorwa zvevaravara
Tora Ctrl + H kuti iratidze iyo Dzorera Tab ye Tsvaga uye Tora dialog bhokisi
Baya wana Tab
Baya More bhatani, kana iripo kuti iwedzere bhokisi rebhokisi
kana Kwete Kuchinja Bhatani rinowanikwa, zvichengetedze. Izvi zvichabvisa chero maitiro aunogona kunge wakatsvaga kare
Iva nechokwadi che wana bhokisi harina chinhu
Click urongwa uye ipapo chengeta Font kuti iratidze iyo Tsvaga Fonti dialog box
Baya Font Color Dhadzika-pasi uye sarudza mumvuri wekutsva iwe wawakashandisa mumagwaro ako
Click OK kuti uvhare bhokisi reGoogle Font. Shoko rinoratidza ruvara rwemashoko pasi payo wana bhokisi
Baya Tsvaga gonhora uye sarudza Main Document kuti usarudze mamiriro ose emagwaro matsvuku mumagwaro ako. Mubhokisi rebhokisi, ichakuratidza nhamba yematambudziko akawanikwa
Click pedyo kuvhara Tsvaga uye Tora dialog box. Mamiriro ose emashoko matsvuku anofanira kusarudzwa
mhando Ctrl + C kunyorera zvose zvinyorwa kune Clipboard
Zvino enda kumagwaro ako matsva
mhando Ctrl + V kuti uise zvinyorwa zvose zvitsvuku kuhurukuro yako itsva
Tsvaga uye Tsiva Maitiro #2
Iwe unogona kushandisa zvakare Tsvaga uye Shandisa nenzira yakasiyana-siyana kuti uwane imwe sarudzo. Uchishandisa nzira iyi, uchatanga nekuita kopi yedhidhiyo uye oenderera mberi nekopi iyo:
mhando Ctrl + H kuti iratidze iyo Dzorera tab ye dialog box
Click More, kana iripo uye bhokisi rebhokisi richawedzera
Iva nechokwadi che wana bhokisi harina chinhu uye tsora yako iri mubhokisi iroro
Baya urongwa bhatani uye ipapo bhura Font kuti uratidze bhokisi rebhokisi
Baya Font Color gonhora uye sarudza otomatiki
Dzvanya OK kuti uvhare bhokisi reGoogle Font. Shoko rinoratidza ruvara ruzivo rwakarurama pasi peBhodhi bhokisi
Iva nechokwadi che Dzoka Na bhokisi harina chinhu
Click Dzokorora Zvose uye Shoko richaratidza bhokisi rekukurukurirana rinokuudza kuti ndedzipi dzinotsiviwa
Click OK kuti uvhare ruzivo rwebhokisi remashoko
Dzvanya Dzavhara zvakare, kuti uvhare Bhokisi rekutsvaga uye Rokudzorera
Iyi nzira ichabvisa zvose zvisiri mutsvuku mumagwaro, zvichisiya zvitsvuku chete, zvichifunga kuti iwe unongogara uine mavara uye mutsvuku mumagwaro. Kana uine mamwe mavara maunoda kubvisa, iwe uchada kudzokorora matanho uye kutsanangura rumwe ruvara kuti ubvise mukati Step 5. Nhamo yega yega nzira iyi ndeyoyo ALL asiri mutsvuku yakabviswa, iyo inogonawo kusanganisira kuguma-kwema-mark mark, saka mutsara wako wakatsvuka unogona kuonekwa mundima imwe chete.
Imwe nzira yekukopa iyo tsvuku tsvuku pane imwe nyanzvi ndeyekutsvaga Tsvaga uye Sarudza uye kushandisa shanduko yakasiyana. Tevera matanho ari pasi apa kuti udzidze sei:
Vhura gwaro idzva raunogona kukopa yako tsvuku tsvuku
Dzokera kumagwaro ako epakutanga
Isa chirevo chako pane imwe nzvimbo mukati memashoko ako matsvuku
Ratidzai musha tab yako ribhoni
Mu Kugadzirisa boka, dika sarudza ndokuzo Sarudza Yese Mhemberero neFomenji Inofanana uye Shoko richasarudza zvose zvinyorwa zvitsvuku zvakanyorwa mumagwaro ako
mhando Ctrl + C kunyorera zvose zvinyorwa kwauri Clipboard
Endai kumagwaro enyu matsva
mhando Ctrl + V uye Shoko rinonyora zvinyorwa zvose zvitsvuku kuhurukuro yako itsva
Iwe unogona, zvechokwadi, zvakare unoita macro kuti uite basa iri kana uchida.
Maitiro Ekuteedzera Namatira muLinux Terminal [YeVamiririri Vokutanga)